Sina: Fibahànana ireo rindrambaiko natao ho an’ny sarambabe ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2009 6:35 GMT
Hatrany amin'ny fiandohan'ity taona ity izay nandidiana ny hanakatonana ny Fanfou, vohikala Sinoa fitorahana bolongana, maro tamin'ireo mpitoraka blaogy no nikisaka nankany amin'ny Twitter mba hanapariaka ny heviny. Mafàna fo maro amin'ny sehatry ny aterineto no nino fa sarotra ny hanàkana ny Twitter noho ny fisian'ireo rindrambaiko maro natao ho an'ny sarambabe hahafahan'ny mpampiasa azy mamaky na mandefa hafatra tsy ilàna akory miditra amin'ny tranonkala. Na izany aza, tsy ela akory nanomboka tamin'ity herinandro ity, Sinoa maro mpampiasa twitter no nitatitra fa ireo rindrambaiko natao ho an'ny sarambabe be mpampiasa toy ny twitpic, itweet, twitese, twittergadget dia voasàkana daholo ary voatery mikisaka mampiasa fitaovana hafa ry zareo.
Raha mitady ny #fuckgfw ao amin'ny twitter ianao, dia hahita ny fanampim-baovao rehetra momba ny tatitra amin'ilay fibahànana. Eto ambany ny fantina amin'ireo tatitra tao anatin'ny andro vitsy lasa: